Izinto Iningi abahlukile To Do In Amsterdam | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Izinto Iningi abahlukile To Do In Amsterdam
Kungakhathaliseki ukuthi uvakashela Amsterdam ngokokuqala noma ukubuyela ukuhlola langa emiseleni Waphinda, uyofuna ukwazi izinto eziningi kuphela esisethubeni lokwenza e-Amsterdam! Uma ukulungele ukufuna ezamehlela ngaphesheya Damrak avenue e-Amsterdam, kulolu hlu oyokwazi ukuphunyuka yakho imilingo ngempela!
Izinto Iningi abahlukile Ukwenza in Amsterdam: Jabulela Tea High In The House Omncinyane Ngo-Amsterdam
Yini kungaba bakhange futhi eyingqayizivele okungaphezu nje kokuba Ntambama Tea e Amsterdams House Omncinyane? Yebo, lokhu nakanjani kuvumelana izinto eziningi kuphela esisethubeni lokwenza e-Amsterdam bill! Le ndlu encane kwenye ingxenye ye-Amsterdam omakhelwane endala kuphela 2 ububanzi. Umnikazi sezihogelwa impilo entsha ngempela ku impahla ezindala: indlu kanye izinkudla umkhaya onamalungu amahlanu! Akukholakali ngoba lokho kwakuwumthwalo, ukuthi ingenye izindaba balindelwe nawe kule tearoom lovely kuphela.
Esitezi sokuqala kuyinto ethokomele kancane itiye esitolo, ngenkathi izibuya lesibili nelesithathu zilungele ukukwamukela itiye wafaka Fairytale. Zikhona ongakhetha eziningi ngesidlo sasekuseni, zebhrantshi, itiye okusezingeni eliphezulu, ngisho kwasemini. Bengilokhu ngisenkonzweni INdlu Omncinyane kabili: kanye sasekuseni ejabulisayo engangiyidlala ihora ngasekupheleni (ukuthi kwakungelona usuku lwami ayetholakala), futhi omunye kakhulu muva i Tea Ntambama ngomunwe sandwich, ophaya ezintathu ezahlukene, futhi scones esihlwabusayo ukuze lapho umninikhaya wethu onomusa othile wacela ukusithatha into kude nathi, thina akazange anqikaze. The Tea Ntambama sikhetha ontengo yakhe yayinqunyiwe at 25 EUR umuntu ngamunye, kuyilapho Tea okuphezulu 35 EUR.
Izinto Iningi abahlukile Ukwenza in Amsterdam: Hlola I KWAMEHLO Filmmuseum
Kuzo zonke izakhiwo bahlakaniphe yesimanje e-Amsterdam, kuba ISO Filmmuseum ukuthi ivelele. Nge okuchachambile yayo, imigqa emhlophe elikhanyayo esisuka egudle uMfula IJ malungana esiteshini sesitimela. I KWAMEHLO ngokuqinisekile phezu izinto esiyingqayizivele kunazo ukwenza ohlwini Amsterdam. ukukhathazeka wayo lomkhulu cinema, anezibonisi eziningana ukunikela anhlobonhlobo esiyinhloko sehlelo futhi zakudala amafilimu. Bangu, Nokho, futhi yesikhashana esiyingqayizivele yezobuciko futhi imisebenzi ezokwenziwa izingane, plus ukubukwa ithatha esihle emuva maqondana enkabeni yedolobha. Futhi bazifihla lapha, futhi umbukiso ohlala njalo, siyindlala cinematic amafilimu umvini Jean Desmet, okuyinto esukela emuva kuze kufike 1907. Thatha kwasemini lapha, kakhulu: ibha cafe kuyinto izinga lokuqala.
Thola Museum Of Bags And namaphesi
Zintathu phansi kokubili izikhwama Antique futhi yesimanje, zemali kanye wallets ukwenza Tassenmuseum Hendrikje njengenye Amsterdam kakhulu ezikhangayo engavamile futhi ziyakhanga. Ogqoka ezikanokusho kuvezwa ngezindlela inxuluma ubudala futhi muhle, avelele zifaka Art Nouveau and Art Deco izingcezu, lonke iKhabhinethi izikhwama ezingavamile futhi 1950s egqamile eyenziwe ngepulasitiki kanzima ifomu bakudala ka Perspex futhi (ngobulungiswa ezingabazisayo) izikhwama vintage wenza ezilwaneni. nemibukiso izikhwama wesimanje nezikhwama zemali lesikhashana Ephothula iqoqo.
I Poezenboot (Ikati Isikebhe)
Uma enye yezinto esiyingqayizivele kunazo ukwenza e-Amsterdam kuhlanganisa kimi ukuthola ukuphulula isilwane Yinhle, bese ubala nami! Qhubeka futhi uvakashele catboat ethandwa kakhulu! Yep, ufunda ukuthi ilungelo! Nakuba amakati ngokuvamile ukugwema amanzi ngazo zonke izindlela, the felines noma Poezenboot, kubonakale kahle ekhaya ku engcwele zabo ezintanta emanzini. It is engcwele isilwane elintantayo ku umsele e Amsterdam. It yasungulwa ngu Henriette van Weelde e 1966 njengekhaya ehlangeni, ogulayo, futhi washiywa felines, futhi akhula aba i esiza abantulayo olusemthethweni.
I esikepeni esiyindlu yokuhlala kuze kube 50 amakati ngesikhathi esisodwa, 14 zazo leli ukuphela kwekhaya. Izivakashi ezingabantu ezingena wamukelekile isitsha kanye. Ziningi izibusiso ukhethe cat ukutholwa, but tourists are also welcome to drop in and scratch a kitty behind the ears.
Njengoba kuyinto zokunikela, engcwele isikebhe uhlala uqinile sibonga iminikelo kwesokunxele yizivakashi. Yonke imali ephakanyiswe uya okubonga asiza kakhulu ekwenzeni Amsterdam amakati amaningi ngangokunokwenzeka. Ikati Isikebhe Foundation ukhokhela neutering zamakati ogama abanikazi abakwazi ukukhokhela ukunakekela wezilwane, kanye strays. Amavolontiya banakekele amakati, abanye babo bamukela yizivakashi. I amakati okukholelwa ukulungisa ekuphileni ezweni kahle kamhlophe emizini yabo emisha.
Hamba Ukudoba Plastic Phakathi Esiyingqayizivele Tour Of Amsterdams Imisele
Uyahamba ukudoba plastic phezu Amsterdam emiseleni ingenye yezinto esiyingqayizivele kunazo ukwenza e-Amsterdam ngokuqinisekile! Futhi ake ngikuxoxele, ingabe ncamashi like kuzwakala. I isinyathelo imvelo abhanqiwe nge umsebenzi siKotilandi ngu Plastic Umkhomo, le 2 ihora isikebhe uhambo eletha ngempela kokubili fun kanye nezindawo olunothile. Uma ngabe ushiya esikebheni, uthola siqu ukudoba inetha, futhi off uya!
Ingxenye best Cishe ukuthi ngenkathi isikebhe izinkambo ukuhamba esidlule ngokuvumelana umzila predetermined, uthola ukuya kuphi ubona ucezu plastic. It turns into a competitive I Spy game where everyone is super invested in finding even the smallest bits of plastic bags. A ukugubha yangempela kwenzeka uma umuntu ubona ibhodlela eduze eceleni komsele. Njengoba induna aqondisa umkhumbi bakwamukele phakathi nezikebhe eboshelwe, engela wena izingalo futhi ngokunqoba ukudoba obangela izinkinga ngaphandle! Zilungiselele ukuxoxa catch angajwayelekile kosuku kanye insini yabo bonke abakhululekileyo nabayizigqila nabanye abagibeli.
Ngicabanga ukuthi lesi senzakalo Kuyazuzisa ngempela kanti yakho, futhi inikeza ngendlela engavamile ukuzwa Amsterdam emiseleni. Uzakuhamba amaningi ngaphandle kokuthola ukhathele, futhi uma ukuvakasha iphelile, wena uzophuma emkhunjini nomuzwa wokufeza okuthile kanye. Konke nje 25 EUR.
Uma wake wazibuza ukuthi kunjani ukuphila kwenye Amsterdams zikebhe, yithuba lakho ukuthola. On uhlu lwethu izinto eziningi kuphela esisethubeni lokwenza e-Amsterdam, ungenza nje ukuthi! Abanikazi anobungane futhi zivule esikepeni esiyindlu zabo zakudala, okuyinto wethulwa 1914 njengoba iloli for isihlabathi futhi amatshe ngaphambi kokuba iguqulwe ngawo-1960. Izivakashi ziyakwazi ukubona cathulisa indlela yabo ngokusebenzisa ethokomele ephilayo endaweni, lapho nedlanzana zingcwecwe ochazayo ukunikeza ongaphakeme phansi ukuphila esikepeni esiyindlu. Abanikazi awuwedwa; cishe 3,000 izikebhe kanye zikebhe kuthiwa ixhunyiwe Amsterdams igesi nogesi amanethiwekhi. ilukuluku wanelisekile, you can stroll along the street to an excellent dining establishment, Indawo yokudlela intshe.
Izinto Iningi abahlukile Ukwenza in Amsterdam: Thatha An lomsindo Tour Through Tuschinski Theatre
Thola umlando ngemuva emangalisa Tuschinski Theatre. Manje cinema isebenze, Theatre ku Reguliersbreestraat liyingxenye yeqembu Pathe. Olungaphambili lwesonto esingavamile okuxubene kobuciko Deco futhi Art Nouveau. Wadala ku Tuschinskis ikhomishini umakhi Hijman Luis de Jong. Kodwa ube muhle njengensimu olungaphambili lwesonto kuyinto, cinema ihholo enkulu kuyinto yaseshashalazini yangempela futhi akukho akamuhle ebukekayo njengoba ukubukela ibhayisikobho ozithandayo ku velvet esihlalweni obomvu.
Empeleni leli hholo inikeza nsuku zonke izinkambo audio ukuthi isiqalo phakathi 09:30 futhi 11:30. Uhambo itholakala kokubili isiNgisi Dutch. Uthatha 45 amaminithi kanye nezindleko 10 EUR okuhlanganisa inkomishi yetiye noma ikhofi. Ukuvakasha okuqondisiwe kuyatholakala futhi amaqembu amakhulu aqala kusuka 15 abantu. ukuze ukubhuka, thumela i-imeyili ku-rondleidingen.tuschinski@pathe.nl.
Uma ungathanda ukuba ujabulele wokuzungeza yaseshashalazini, ungathatha look at the kuhlelwe ukuhlola movie. Lapho, uyothola neminye ukusebenza kuwebhusayithi Pathe. Ukuze ujabulele ibonisa ku isikhala enhle yaseshashalazini, Bheka ama-movie eHholo Omkhulu. Ngezikhathi ezithile, lapho kungaba amakhonsathi bukhoma kanye.
Izinto Iningi abahlukile To Do In Amsterdam: Qhubekani An nokuzidela Escape Room In Rijksmuseum
Ehlobo ka 2018 Rijksmuseum umkhankaso ukuthi lisho ukuthini igama ukuba elinganiselwe sasehlobo ekhethekile. Manje eliyingqayizivele Escape umdlalo experihlangenwe futhi kuhla lwethu izinto eziningi kuphela esisethubeni lokwenza e-Amsterdam futhi yikhona okuthatha indawo Amsterdams Museum edume kakhulu. Nokho, kubonakala sengathi ngemva impumelelo kokuqala, isigaba lapha ukuhlala. Okuhlangenwe nakho ihlala ophanayo 1.5 amahora bese idonsa ngempela emkhathini. Wena Akhethelwe uyalulama ifomula Kwebiwe incwadi ngekhulu i 18th by umthakathi Italian futhi Alchemist Alessandro Cagliostro.
The Worlds kuphela Museum abazinikele Wonders Of Fluorescence
Amsterdam abadumile-Anne Frank House liseduze kakhulu lokhu Museum encane enikelwe izindaba Psychedelic kakhulu okuyinto isizathu esikhulu esenza ngayo enye yezinto esiyingqayizivele kunazo ukwenza e-Amsterdam!
Umnikazi futhi eziqhutshwa amahhashi tailed umculi Nick Padalino. Electric Ladyland nakanjani phezu izinto esiyingqayizivele kunazo ukwenza ohlwini Amsterdam. Kungatholakala kubhalwe ngaphansi enegama elithi alifane emgwaqweni ezingeni yobuciko, Electric Lady. Electric Ladyland yizwe lokuqala (futhi ebonakala kuphela) museum focusing solely on the magic of fluorescent light.
Ukulungele uhambo kancane uhambo, kodwa ukuze oh ezithakazelisayo okuningi? Catch ride nge Londoloza Isitimela! Ayikho imali ezifihliwe, nje kalula!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Izinto Iningi abahlukile To Do In Amsterdam” ungene kusayithi lakho? ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-unique-things-amsterdam/- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)